Qilaafkii Jose Mourinho Iyo Pep Guardila Oo Wili Sii Socda Kadib Guushii City.
Home Horyaalka Ingiriiska Qilaafkii Jose Mourinho iyo Pep guardila oo wili sii socda kadib guushii...
Hogaamiyaasha Premier League ayaa haatan ah 7 dhibcood oo nadiif ah miiska ugu sareeya ka dib guushii ay si fudud 3-0 kaga gaareen kooxda Tottenham ciyaar la dhacday garoonka Etihad.
Tababaraha kooxda Tottenham ayaa had iyo jeer lagu kalsoonaan karaa inuu helo qaab uu uga xanaajiyo weerarka Pep Guardiola ee kubada cagta isla markaana uu ku guuleysto hanashada guusha.
Si kastaba ha noqotee fiidnimadii Sabtida ma jirin wax calaamad ah oo muujinaya in Mourinho uu soo gabagabeynayo guulaha Citybkaasoo haatan loo kordhiyay 16 kulan tartamada oo dhan isagoo uga mahadcelinaya guushii 3-0 ee Etihad.
Tani waxay ahayd guushii ugu weyneyd ee soo gaarta labada tababar ee waa weyn tan iyo markii kooxda difaacaneysa ee Barcelona ay 5-0 ku garaacday Real Madrid garoonka Camp Nou sanadkii 2010, waxayna umuuqataa wax aan macquul aheyn in Mourinho uu soo kabto sidii uu markaas sameeyay markii Boortaqiiska uu sii waday inuu ku dhiiri geliyo los Blancos hanashada horyaalka labo sano kadib.
Tartankooda ayaa ahaa mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan kubada cagta Yurub waqtiyadii ugu dambeeyay tanina waxay tusaale kale u tahay isku dhaca qaabkooda.
Magaalada ayaa gacanta ku dhigtay hanashada waxayna ku ciyaareen qeybtii ay ka soo horjeedeen iyagoo isku dayay inay abaalmarin ka helaan khadka tooska ah ee ay maamusho Mourinho ayaa kooxdiisa ku xardhay ciyaartoy difaac leh isagoo rajeynaya inuu ka faa’ideysto xawaaraha weeraryahanadiisa nasashada si ay u helaan guul la yaab leh.
Qaabka booqdayaasha ayaa sababay dhibaatooyin qaar horaantii iyadoo saameynta Ruben Dias uu kursiga keydka ku fadhiyay oo ay weheliso soo laabashada Sergio Aguero – iyo Aymeric Laporte oo la siiyay fursad ay ku qiimeeyaan sheegashadiisa booska caadiga ah.
Si caddaalad ah, guushii 23-aad ee City ee rigoorada ayaa xoogaa nasiib ah, iyadoo Pierre-Emile Hojbjerg uu ku dhuftay Ilkay Gundogan ka dib markii uu si qaldan u maamulay baas.
Ka dib markii la waayey seddex ka mid ah toddobadii laad ee xilli ciyaareedkaan, rigoore-sameeyaha nasiibku wuxuu istaagay Rodri, ciyaaryahanka reer Spain ayaa ku faraxsan inuu arko dadaalkiisa oo ku tuuraya gacanta Hugo Lloris kadibna daba mariyey nin faransiiska ah.
Qof kasta oo kale, in kasta oobuu waxyar ka xumaaday in Ederson uusan helin markiisa, marka loo eego goolhayaha reer Brazil ayaa u soo baxay safka hore si uu u tuuro Rigoorada.
Haddii Lloris nasiib u yeelan waayey inuu badbaadiyo rigoorada wuxuu runtii ahaa dambiilaha labaad ee City markii uu garaacay Gundogan darbadiisa hoose, ka dib markii uu si firfircoon uga soo orday Raheem Sterling.
Lambarkiisa ka soo horjeedda Ederson, ayaa dhanka kale wuxuu wali ku sii jeedaa inuu ka qeyb qaato ciyaarta daqiiqaddiisuna waxay timid daqiiqadii 66aad markii uu ku lug lahaa goolka seddexaad ee City.
Wuxuu qoday baas cajiib ah oo 70-yaard ah si uu u caawiyo Gundogan, in kasta oo dhammeystirkii Jarmalka uu ahaa mid aad u wanaagsan, markii uu gudaha u galay Davinson Sanchez oo uu si xoog leh ku dhammeeyay.
Xaqiiqdii wuxuu galay ciyaarta isagoo garaacay cadawgiisii hore ee kulamada isku xiga markii ugu horeysay khilaafkooda 12 sano. Laakiin shaqooyinkooda maamul ayaa si cad ugu socda jihooyinka ka soo horjeedda waxaadna la yaabban tahay inay waligood noqon doonaan kuwa xafiiltama.
Guusha City ayaa ka dhigeysa 17 dhibcood oo ka sarreysa Spurs, iyo sidoo kale 7 dhibcood oo ka sareysa Premier League kooxda labaad Runtii, waxay sheegeysaa in cadaawadda caanka ah ee labada lamaane ay gabi ahaanba baaba’day.
Ka hor inta uusan bilaaban Mourinho wuxuu si dulqaad leh u sugayay tunnel-ka madaxa City wuxuuna siiyay dhabar jab aad u fiican oo dhabarka ka buuxa.
Dabcan, Mourinho ayaa heli doona aargudasho markii labadan koox ay mar kale ku kulmaan Wembley finalka Carabao Cup bisha April
Si kastaba ha noqotee, mid ka mid ah tartamada ugu waa weyn ee kubada cagta ayaa bilaabaya inuu meesha ka baxo, iyadoo hoosta laga xariiqay guushan bilowga ah ee kooxda Guardiola ee City.
Previous articleThomaz Tuchel oo ka hadlay xaalada bin chilwel iyo Marcos Alonso.
Next articleReal Madrid oo weyneysa Sergio Ramos hadii Gareth Bale soo laabto